Imigqa yamakhasi: Hudula bese ulahla i-WordPress Theming | Martech Zone
Imigqa yamakhasi: Hudula bese ulahla i-WordPress Theming
ULwesine, May 12, 2011 NgeSonto, uJanuwari 19, 2014 Douglas Karr
Kuyindida ukuthi bengikhuluma ne-ejensi namhlanje ekuseni ngobunzima bokuhlelwa ngaphakathi kwe-WordPress. Kubantu abanjengathi bobabili abathuthukisi be-PHP, benze ithoni yezingqikithi nama-plugins futhi baqonde ngokuphelele i-WordPress API, akukubi. Ngeshwa, lokho akutholakali kwezinye izinkampani nabantu ngabanye, noma kunjalo. Ngezansi - ukubiza unjiniyela njalo lapho ufisa ukuguqula ukwakheka kwakho noma itimu kungabiza!
I-PageLine iguqula lokhu ngomkhiqizo wabo, PlatformPro. Idizayini engaphambili yePlatform isuselwa kumqondo omusha sha obizwa nge- izingxenye. Ngamafuphi, izigaba ziyafana namawijethi weWordPress (okuqukethwe okudonsa nokudonsa ibha eseceleni) kuphela asebenza kangcono kakhulu ekwakheni imiklamo emikhulu nokusetshenziswa ngamathempulethi. Nazi ezinye zezizathu zokuthi kungani izigaba zimangalisa:
Izigaba ze-Plug-and-Play yizicucu ezenziwe ngaphambili zedizayini yewebhu, engaba yinkimbinkimbi kakhulu (isb. Isilayida sesici, ukuzulazula, i-carousel, njll.). Yonke ikhodi ihlala iqukethwe futhi iphethwe yi-API yesigaba; ngakho-ke konke owake wakubona kulula ukuhudula bese uphonsa isikhombimsebenzisi kanye nezinketho.
Izigaba Zokulawula zingaguqulwa zivulwe noma zivaliwe kusetshenziswa ikhasi nekhasi bese kungezwa izinhlobo zazo zokuposa nezinketho. Lokhu kusho ukulawula okuphelele kwawo wonke amakhasi kusayithi lakho.
Ukuthuthukiswa Kungadalwa futhi kuguqulwe ngabaqambi engqikithini yengane yeBase. Lokhu kusho ukuthi abaklami bangangeza noma bashintshe izigaba zokudonsa nokudonsa ngemizuzwana.
Izigaba ezilula zengeza umaki we-html ojwayelekile nezingwegwe zenkambiso (yokwelula ukusebenza). Lokhu kunciphisa ikhodi eningi ngenkathi ikunikeza ukusebenza okwengeziwe ngasikhathi sinye.
Izici ezingaphezulu Ozozithanda
Isakhiwo Sokwakha - Ngaphezu kwezigaba ezintsha zokudonsa nokudonsa, iPlatform inezakhi zokwakha ezihudulwayo zokumisa ubukhulu besiza sakho. Ungakhetha ububanzi besiza esisha, noma ulungiselele ukwakheka ngakunye kwezingu-5 zebha eseceleni ezahlukahlukene; bese ukhetha ukwakheka ekhasini ngalinye.
i-bbPress neBuddyPress - Ipulatifomu ibuye isekele ukuhlanganiswa neBuddyPress futhi inengqikithi ehambelana neforamu ye-bbPress (uhlelo lonjiniyela). Ukuhlanganiswa akunamthungo futhi kunika abasebenzisi bePlatform ubukhona obuchwepheshe nobunamandla impela.
Amamodi Wobubanzi Obugcwele Nobubanzi Obungaguquki - I-PageLine nayo ibhale izindlela ezahlukahlukene zokwakha. Kunezindlela ezimbili zokwakha isayithi lakho ngePlatform. Imodi yobubanzi obugcwele ikuvumela ukuthi ube nezinto eziqukethe ububanzi obugcwele (njengezithombe zangemuva), futhi imodi ebanzi engaguquki ikunikeza okuqukethwe okungaguquki nobubanzi bezinto zangemuva.
Ingane Yengane Eyisisekelo - Ingqikithi yengane yeBase yakhelwe ukukusiza ukuthi wenze ngezifiso iPlatform kalula nangezinqubo ezihamba phambili zokwakha iwebhusayithi. Yisebenzise ukuphonsa ukwakheka okuthile kwe-CSS, noma usebenzise 'izingwegwe' ukwengeza ikhodi efana ne-HTML noma i-PHP kuzindawo kuyo yonke ingqikithi. Babuye bakha ngendlela elula yokuthi ungeze izigaba zakho ezizenzakalelayo!
Zamanani - Izindleko zelayisense elilodwa lobuchwepheshe zizobiza u- $ 95. Ilayisense lonjiniyela lokusetshenziswa okuningi lizothengiswa ngo- $ 175, okubandakanya ukuhambisana nesithangami se-bbPress, ihluzo nezixhumanisi ezisusiwe.
Tags: i-datasiftophendula nge-imeyiliukukhomba kwe-geoAmavidiyo Wokumakethaishaneli yeselula
I-EyeTrackShop: Ukulandelwa Kwamehlo nge-Web Cam
Ngabe I-Small Biz Social Media Ishintshile?
May 12, 2011 ku-8: 29 PM
Ipulatifomu iyithuluzi elihle lokuthuthukisa ku-WordPress! Laba bantu benza umsebenzi obulalayo ngokwenza ukuthi isoftware yabo isebenziseke kalula futhi ifake nezici eziningi kunokuba unganyakazisa induku enkulu ngempela ku 🙂
Qhubeka nomsebenzi omuhle. Angisakwazi ukulinda ukubona okulandelayo!
May 13, 2011 ku-12: 59 AM
Isibuyekezo esihle Doug! Ngigijime ngaphesheya kwePaltformPro ngesonto eledlule ngenkathi ngifunda ama-nettuts + blog futhi ngazibuza ukuthi ingabe inhle kangako itimu leyo. Kubonakale kukuhle ukuba yiqiniso, kepha ngijabule ukubona ukuthi ingakwenza. Ingashintsha kalula indlela engiklama ngayo amasayithi futhi kubonakala sengathi kungangongela isikhathi esiningi.
Siyabonga ngaleli voti lokuzethemba!
May 15, 2011 ku-4: 40 AM
i-athikili enkulu uDoug, ngisanda kuthenga lokhu kusayithi le-buddypress engikwenzayo. Nginomfana wami owakhiwe phesheya osebenza kuwo manje. Ngikubheke ngabomvu ukuthi kwenziwe
Jan 7, 2012 ngo-3: 27 PM
sawubona nginombuzo: kungenzeka yini ukubeka imenyu eyengeziwe ngomugqa wekhasi, imenyu ephezulu neyesobunxele futhi ufake nenqubomgomo yobumfihlo kusixhumanisi sokuzikhulula onyaweni? ngoba ukwenza lokhu nge-wordpress kunzima impela.
Jan 7, 2012 ngo-3: 34 PM
Sawubona Perla - usho ukuthini nge-Pagelines noma ngetimu ejwayelekile ye-WordPress? Ngengqikimba ye-WordPress, kulula kakhulu ukwengeza enye imenyu nesitatimende sonyawo kepha uzodinga ukuthola umuntu ongahlela isihloko sakho futhi owaziyo indlela azungeze ngayo i-WordPress. Kukhona ithani labantu laphaya abakwenzayo, noma kunjalo. Ngingacinga 'i-wordpress designer' endaweni yangakini ku-Google bese ngibona ukuthi uthola ini!
Jan 7, 2012 ngo-5: 33 PM
sawubona nginombuzo: kungenzeka yini ukubeka imenyu eyengeziwe enekhasi
umugqa, imenyu ephezulu neyesobunxele futhi ibuye ibeke inqubomgomo yobumfihlo en nesitatimende
isixhumanisi onyaweni? ngoba ukwenza lokhu nge-wordpress kunzima impela
. ngisho ngezinhla zamakhasi
Jan 7, 2012 ngo-5: 35 PM
ngisho ngemigqa yamakhasi
Jan 7, 2012 ngo-5: 58 PM
Ungangeza indawo ye-html onyaweni lapho ungangeza khona leyo mininingwane. Angiqiniseki ngemenyu yesibili, noma kunjalo. Lokho kungadinga umsebenzi othile!